ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရှိ ကုမရနိုင်လို့ သတိရှိကြဖို့ပြောလာတဲ့ ကျော်ကျော်ဗို – Askstyle
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရှိ ကုမရနိုင်လို့ သတိရှိကြဖို့ပြောလာတဲ့ ကျော်ကျော်ဗို
ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြ စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္က ဒီကေန႔ နံနက္မွာပဲ သံသယရိွသူတစ္ေယာက္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ သံသယရိွသူဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔ နံနက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို ဆိုက္ေရာက္လာတဲ့ ေလယာဥ္နဲ႔ လိုက္ပါလာသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသံသယရိွသူကိုေတာ့ ရန္ကုန္ ေဝဘာဂီေဆးရံုမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အႏုပညာ႐ွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ သိထားသမ်ွကို ပရိသတ္ေတြ၊ ျပည္သူေတြထံ မ်ွေဝေပးေနတာျဖစ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗုိကလည္း အခုလို သတိေပးထားပါတယ္။
“သာမန္လူေတြထက္ေဆးပညာ ဗဟုသုတအမ်ားႀကီးပိုတဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြ ဒီလိုဝတ္စုံမ်ိဳးေတြကို လွလို့ဝတ္ထားၾကတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ေတြႏွာေခါင္းေလးအုပ္လိုက္႐ုံ … Mask ေလးတပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ လုံျခဳံသြားၿပီလား…? လူထူထပ္တဲ့ေနရာေတြမသြားပါနဲ႔”
“ျဖစ္လာရင္…ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရွိရွိ နိင္ငံျခားသြားကုလို့ရတဲ့ေရာဂါမဟုတ္ဘူး ရွိတာနဲ႔ကု …မရွိရင္မကုနဲ႔ …ဒါပါပဲသတိရွိၾကပါ” ဆိုၿပီး သတိေပးလာပါတယ္။
ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ အခုဆိုရင္ ေလထုထဲကတဆင့္ ပ်ံ့ႏွံေနတာမို႔ Mask ေလးေတြ အသံုးျပဳကာကြယ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်က ဒီကနေ့ နံနက်မှာပဲ သံသယရှိသူတစ်ယောက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယရှိသူဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ နံနက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ လေယာဉ်နဲ့ လိုက်ပါလာသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသံသယရှိသူကိုတော့ ရန်ကုန် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ စောင့်ကြည့်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း သူတို့ သိထားသမျှကို ပရိသတ်တွေ၊ ပြည်သူတွေထံ မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကျော်ကျော်ဗိုကလည်း အခုလို သတိပေးထားပါတယ်။
“သာမန်လူတွေထက်ဆေးပညာ ဗဟုသုတအများကြီးပိုတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ဒီလိုဝတ်စုံမျိုးတွေကို လှလို့ဝတ်ထားကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျွန်တော်တို့တွေနှာခေါင်းလေးအုပ်လိုက်ရုံ … Mask လေးတပ်လိုက်ရုံနဲ့ လုံခြုံသွားပြီလား…? လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမသွားပါနဲ့”
“ဖြစ်လာရင်…ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရှိ နိင်ငံခြားသွားကုလို့ရတဲ့ရောဂါမဟုတ်ဘူး ရှိတာနဲ့ကု …မရှိရင်မကုနဲ့ …ဒါပါပဲသတိရှိကြပါ” ဆိုပြီး သတိပေးလာပါတယ်။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အခုဆိုရင် လေထုထဲကတဆင့် ပျံ့နှံနေတာမို့ Mask လေးတွေ အသုံးပြုကာကွယ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။